४ वर्षमै फिल्म खेल्न थालेका महेश बाबुको कति छ सम्पत्ति? - Everest Dainik - News from Nepal
४ वर्षमै फिल्म खेल्न थालेका महेश बाबुको कति छ सम्पत्ति?
एजेन्सीः दक्षिण भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता हुन् महेश बाबु । उनको जन्म सन् १९७५ अगस्ट ९, चेन्नईमा भएको थियो । उनको माता पिताको नाम कृष्ण र इन्दिरा देवी हो ।
सानैदेखि फिल्म लाइनमा सौख बनाएका महेश बाबुले अन्ततः यसैमा करिअर बनाए । आज उनी दक्षिण भारतीय फिल्मका महँगा अभिनेता हुन् ।
महेश बाबुको अफयेर मिस इण्डिया नम्रता शिरोधकरसँग ४ वर्षसम्म चलेको थियो । उनले विवाह पनि उनीसँगै गरे । उनको एक छोरा र एक छोरी सन्तान रहेका छन् । महेश बाबु एक भारतीय फिल्मका एक चर्चित अभिनेता, निर्माता, मिडिया परसोनालिटी र समाजसेवी हुन् ।
याे पनि पढ्नुस मुकेश अम्बानीले यस वर्ष सम्पत्तिमा १८ खर्ब रुपैयाँ थपे
चार वर्षको कलिलो उमेरमा उनले सेटमा पाइला हालेका थिए । महेश बाबुलाई निर्देशक दशारी नारायन राओले बाल भूमिकाका लागि लिएका थिए ।
सन् १९९९ मा महेश बाबुले पहिलो फिल्म राजा कुमारुदुबाट डेब्यु गरेका थिए । उक्त फिल्मलाई रागाबेन्द्र राओले निर्देशन गरेका थिए । उनी २० मिलियन डलर सम्पत्तिका मालिक हुन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वका २१ सय ५३ अर्बपति ४.६ अर्ब मानिसभन्दा धनी छन्
महेश बाबु एउटा फिल्म खेलेको २० देखि २० करोडसम्म लिने गर्छन् । उनको हैदरवादमा आलिशान घर रहेको छ । उनी डेढ करोड पर्ने रेन्ज रोभर कार चढ्छन् ।
ट्याग्स: महेश बाबु, सम्पत्ति